Khatarta caafimaad iyo shil ee gaari Hindiga Bajaaj leeyahay oo la soo bandhigey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Khatarta caafimaad iyo shil ee gaari Hindiga Bajaaj leeyahay oo la soo bandhigey
Khatarta caafimaad iyo dhimasho ee gaari Hindiga Bajaaj leeyahay oo la soo bandhigey. Gaari Hindiga Bajaaj oo Somaliya laga mamnuucay intii dawlada saxda ah dalka ka jirtey ayaa si xooga dib ugu soo noqdey.
Inkastoo gaari miskiinkani dad badan shaqo ka heleen hadana waxa badatey khatarta caafimaad iyo midashil ee uu leeyahay xilli dalku lahayn dawlad adag oo dalka wada gaarta.
Bisha Janaayo waxaa dhacday 132 shil, 9 qof ayaa dhimatay, 32 dhaawac fudud, 67 dhaawac culus, khasaaraha gadiid waxaa lagu qiyaasay 141 gaari. Dadka waxaa waxyeelay hey’ado kala duwan: Booliiska 4 qof, Xoogga hal qof, usluubta waxba, NISA 4 qof, AMISOM hal qof, Bajaaj 80 qof, Baaskil waxba, Mooto 15 qof, Gaari Dameer hal qof iyo gaari gacan oo waxbo ah.
Febraayo: waxaa dhacday 118 shil, 6 qof ayaa dhimatay, 52 dhaawac fudud, 59 dhaawac culus, khasaaraha gadiid waxaa lagu qiyaasay 214 gaari. Dadka waxaa waxyeelay hey’ado kala duwan: Booliiska 2 qof, Xoogga hal qof, usluubta waxba, NISA hal qof, AMISOM waxba, Bajaaj 92 qof, Baaskil waxba, Mooto 10 qof, Gaari Dameer waxbo iyo gaari gacan hal qof ah.
Maarso: waxaa dhacday 94 shil, 7 qof ayaa dhimatay, 19 dhaawac fudud, 51 dhaawac culus, khasaaraha gadiid waxaa lagu qiyaasay 174 gaari. Dadka waxaa waxyeelay hey’ado kala duwan: Booliiska 5 qof, Xoogga waxba, usluubta waxba, NISA 2 qof, AMISOM 2, Bajaaj 61 qof, Baaskil hal qof, Mooto 5 qof, Gaari Dameer hal qof iyo gaari gacan waxbo.
April: waxaa dhacday 124 shil, 10 qof ayaa dhimatay, 54 dhaawac fudud, 46 dhaawac culus, khasaaraha gadiid waxaa lagu qiyaasay 218 gaari. Dadka waxaa waxyeelay hey’ado kala duwan: Booliiska 2 qof, Xoogga 2 qof , usluubta waxba, NISA 4 qof, AMISOM 2, Bajaaj 79 qof, Baaskil waxbo, Mooto 13 qof, Gaari Dameer 2 qof iyo gaari gacan waxbo.
Intaasi waa Muqdisho kaliya laakiin xisaabtu kuma jirto magaalooyinka kale ee dalka ee hadda iyo jeer laysku dhegan yahay kadib bajaaj qof taabatey ama shil ay galeen.
Caafimaadka hawada magaalooyin nadiif ahaa ayaa aad u xumaatey waxana batey cudurada sambabada oo Somaliya ku yaraa awal.
Inkastoo Muqdisho laga manuucayo gaari Hindiga ma jiro talaabo qaran oo dalkoo dhan looga ciribtirayo lacagta la siinayo cadowga koowaad ee Muslimiinta ee sanam caabudka Hindida..
Soo akhrintii C/llaahi Warmooge